सानाठुला सबै सुचना र छलफल भाईरल झैँ फैलाउन सकिने प्लेटफर्म नै सामाजिक संजाल हो-पवन धामी - MeroReport
सानाठुला सबै सुचना र छलफल भाईरल झैँ फैलाउन सकिने प्लेटफर्म नै सामाजिक संजाल हो-पवन धामी
सुदुरपश्चिमका पवन धामी, पेशाले जानकी टेक प्रालिका सोसल मिडिया अफिसर । एसएलसी र प्लस टु महेन्द्रनगरबाट सकेर पवन हाल काठमाडौंको सेन्ट जेभियर्स कलेजमा बिएस्सी आईटीको छैटौँ सेमेस्टरमा अध्ययनरत छन् । अङ्ग्रेजी उपन्यासका पारखी यिनी आफूलाई हलिउडका सुपरहिरो सिनेमाहरुको ठुलो फ्यान समेत बताउँछन् । पेशाले नै सोसल मिडिया अफिसर भैसकेपछि ब्लगिङ र सोसल मिडियामा यिनको सक्रियता नहुने त कुरै भएन । मेरोरिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा यसपाली हामीले उनै पवन धामीलाई प्रस्तुत गरेका छौँ । प्रस्तुत छ पवनसंगको कुराकानी :
तपाइ सुचना प्रविधिको क्षेत्रमा कहिलेदेखी कुनकुन रुपमा हुनुहुन्छ?
सुचना प्रविधिको क्षेत्रमै अध्ययनरत भएकाले सेन्ट जेभियर्स कलेजमा पढ्न सुरु गरेदेखि आईटी फिल्डमा छिरेको भन्न अनुचित नहोला तर वास्तवमा मलाई सानैदेखि कम्प्युटर र विभिन्न ग्याजेटहरु चलाउन अनि त्यसबारे सबैकुरा जान्न निकै रमाइलो लाग्थ्यो । कक्षा ७, ८ मा पढ्दै रहँदाको कुरा अहिले पनि सम्झिन्छु । घरबाट साईकल कुदाएर १० किलोमिटर टाढा साइबरसम्म पुग्थेँ, जान्ने मन लगेका विभिन्न कुराबारे नेटमा खोज्ने गर्थेँ ।
सोसल मिडियामा आफूलाई कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ, ब्लगरका रुपमा या अरु केही?
pvpixels.com बाट ब्लगगिङ सुरु गरेको हुँ । त्यसमा मेरो काम भनेको ब्लगगिङ गरेर पेज र्‍याङ्क बढाउने थियो त्यसकारण मैले बिभिन्न खालका रमाईला बिषयमा काम गर्ने मौका पाएँ र त्यो समयमा मलाई महसुस भयो कि ब्लगगिङ गर्न धेरै रमाइलो हुदोँरहेछ । ब्लगिङलाई म सँधै निरन्तरता दिइरहनेछु तर करिअरको हिसाबले भन्नुपर्दा चाँही मलाई एप्स बनाउने इच्छा छ र भविश्यमा मलाई एक स्किल्ड डेभ्लपरको रुपमा संसारले चिनोस् भन्ने चाहन्छु ।
हामीले सुने अनुसार तपाँइ Elist10.com, Blog.sparrowsms.com, Pvpixels.com र Techmagz.com मार्फत ब्लगिङमा सक्रिय हुनुहुन्छ । हो?
हो, सुरुवात मैले Pvpixels बाट गरेको हो तर अहिले म SparrowSMS blog को लागि सामग्री तयार पार्छु र Elist10 जस्ता अरु भिविन्न वेबसाईटको लागी पनि म बिषयबस्तु तयार गर्छु र मलाई यसरी कन्टेन्ट लेख्न साह्रै नै रमाइलो लाग्छ । ninepunches.blogspot.com भन्ने मेरो आफ्नो ब्लग पनि छ जहाँ म बिभिन्न किसिमका रमाईला गफ, चलचित्रको रिभ्यू, ग्याजेटका नयाँनयाँ खबरहरु पनि पोष्ट गर्ने गरेको छु ।
यहाँले निरन्तर ब्लगिङ गर्ने प्लेटफर्म चाँही कुन हो नि !
Blogspot र wordpress नै हुन् ।
धेरैजसो म आफूलाई रमाईलो महसुस हुने कुराहरुको बिषयमा ब्लगगिङ गर्छु तर मलाई नेपालको बारेमा रहेको बिभिन्न रुचीपुर्ण बिषयमा ब्लगगिङ गर्न मन लाग्छ । जस्तै मैले केहि समय अगाडि Gurkha Heroics, Second Constituent Elections जस्ता बिषयमा ब्लगिङ गरेको थिएँ र यस्तो बिषयमा लेख्दा धेरै कुरा सजिलै लेख्न सकिन्छ र ब्लग पढ्नेहरुले पनि यस्तो बिषयमा धेरै रुची देखाउँछन् ।
एकबर्ष जति भयो होला ।
रमाईला गफ, चलचित्रको रिभ्यू, ग्याजेटका नयाँनयाँ खबरहरु, अहिले भइरहेको देशको बिभिन्न सवालहरु र कामले दिए अनुसारको बिषयमा नै लेख्न रुचाउँछु ।
अरु सोसल नेटवर्किङ साइटहरुमा प्रायजसो अहिलेको चल्तीमा रहेका विषयमा छलफल गरिन्छ ।
SparrowSMS मा परिक्षाको नतिजा आउने समय हुँदा धेरै साथीहरुको एउटै प्रश्न हुन्छ-'नतिजा कहिले हो त ! किन यती ढिला?' भन्छन् तर नतिजा आउने दिन चाँही सबैजना -'लौ ! आजै रिजल्ट हो ! प्रभु, बरु यो सालभरी नतिजा नखुले नि हुन्थ्यो !' भन्दै बस्छन् ।
मानिसहरु अचेल सामाजिक संजालमा हुने बहसमा निकै सहभागी भैरहेका हुन्छन, किन यस्तो भएको होला? बन्द कोठामा बसेर भर्चुअल रुपमा संचार गर्दा आनन्द आउने हुनाले या आफ्ना कुराहरु अरुमाझ पुर्‍याउन न्यु मिडियाले हरेक ब्यक्तिलाइ अलगअलग प्लेटफर्म दिएका हुनाले?
हो, मानिसहरु अचेल सामाजिक संजालमा हुने बहसमा निकै सहभागी भैरहेका हुन्छन र मलाई लाग्छ यसको दुइ वटा कारण छन् । पहिलो- आफुलाई रुची लागेको बिषयमा सबैलाई आफ्नो सोचाईहरु प्रस्तुत गर्न मन लाग्छ । दोश्रो- जति अरुको अगाडि बोल्न हिच्किचाए पनि जब आफु एउटा ल्यापटप/कम्प्युटर अगाडि बसिन्छ तब कसैको रोकटोक हुँदैन अर्थात कसैलाई अप्ठ्यारो महसुस हुन्न र आफ्नो कुरा खुल्ला रुपमा प्रस्तुत गर्न सजिलो हुन्छ ।
सोसल मिडियामा भइरहेका बहसले नयाँ के गरिरहेको जस्तो लाग्छ यहाँलाइ? ब्यक्तिको ज्ञानको दायरा फराकिलो पारेको छ या मात्र भेटेर गरिने कम्यूनिकेशनलाई भर्चुअल बनाईदिएको छ?
सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन भनेको सुचनाहरु viral रुपमा (तिव्र गतिमा) ईन्टरनेट मार्फत फैलिने नै हो । संविधानसभाका निम्ति दोश्रोपटक भएको चुनावलाई नै एउटा उदाहरणको रुपमा हेरौँ न ! पहिलोपटक पाँच बर्ष अगाडी चुनाव हुँदा पाएको सोसल मिडिया रेस्पोन्ससँग अहिलेको तुलना गरुम, अहिलेका युवाहरुले मुश्किलले टिभीमा समाचार हेर्छन । अनि अहिलेका चलेका पत्रिकाहरुको पनि विभिन्न मोबाईल एप्सहरु आइसकेका छन् । अब रेस्टुराँकै कुरागर्दा पनि धेरै जसो रेस्टुराँ को ट्विटर र फेसबुक फ्यान पेज छन् । यी सब कुरालाई मध्यनजर गर्दा मान्छेहरुलाई पहिलेको तुलनामा अहिले खबरहरुबारे धेरै नै जानकारी भएको पाईन्छ । यो सबैको पछाडि सोसल मिडिया नै प्रमुख कारण हो र सोसल मिडियाले नै सहज बनाएको हो भन्ने कुरामा म पनि सहमति जनाउँछु ।
एउटा7BADASS GURKHA HEROICS YOU WON’T BELIEVE ARE FOR REAL भन्ने र अर्को चाँही HSEB grade 11 results 2070 will be published today! भन्ने छ । पछिल्लो चाँही ४५ हजार भन्दा धेरै पटक हेरिएकोरहेछ ।
मेरो विचारमा ब्लगरले पाठकको ध्यान तान्न trending topics मा एकदमै interesting content लेख्नैपर्छ ।
यहाँ त सुचना प्रविधिको विद्यार्थी पनि र काम पनि यही क्षेत्रमा गर्नुहुन्छ । नेपालमा टेक्नोब्लगहरु अलि कम हुन् कि झैँ लाग्छ । किन यस्तो होला प्रविधिप्रति मान्छेको बुझाइ कम भएर या यस्तो ब्लग लेख्नेहरु नै कम भएर?
मलाई लाग्छ कि हामीसँग हाम्रो नेपाली टेक्नोब्लग हेर्ने रेगुलर भ्यूअर नै छैनन । कसैले ब्लग बनाएर राम्रो रिभ्युहरु दिए पनि मनिसहरु अरु नै चर्चित ब्लगहरु फलो गर्ने गर्छन् । उसो त हामीकहाँ धेरै त्यस्ता नेपाली ब्लगहरु पनि छन् जहाँ राम्रा तथा रोचक सामग्रीहरु भेटिन्छन् ।
धेरैजसो त विद्यार्थीहरु नै हुन् ।
नेपाली ब्लगहरुका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा aakarpost.com, livingwithict.com र अङ्रेजी ब्लगमा चाँही theoatmeal.com को म एकदमै ठुलो फ्यान हुँ ।
हामीले सुचनाप्रविधिका बारेमा यतिका कुरा गर्दैगर्दा यहाँसंग सोध्न मन लागेको अर्को कुरा चाँही सामाजिक संजालको खास महत्व के?
ईन्टरनेटको यो दुनियामा सोसल मिडियाले कुनै पनि किसिमका डिजिटल सामग्रीहरुको संरक्षण गर्न एकदमै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र फेसबुक र ट्विटर जस्ता सोसल मिडिया साईटमा धेरै मनिसहरु भएकोले आफ्ना कन्टेन्टहरु ती उपभोक्ताहरुसम्म पुर्‍याउन धेरै सजिलो भएको छ ।
कुनै पनि किसिमका साना देखी ठुला कुराहरु अर्थात सुचनाहरु र त्यसमा हुने छलफलहरु भाईरल झैँ फैलाउन सकिने एउटा प्लेटफर्म नै सामाजिक संजाल हो ।
ब्लगिङलाइ ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आचारसंहिता (Code of Conduct) पनि चाहिन्छ भन्ने बहस पनि छ एकातिर, तपाइलाइ के लाग्छ, के यो जरूरी छ?
मान्छेहरुले सहजै सबैको बारेमा जे पनि लेख्नसक्ने भएकोले हो एउटा निश्चित आचारसंहिताको मर्यादा बनाउन र पालना गर्न जरुरी छ । साथै म संधै यो कुरामा सचेत हुन्छु कि मेरो सामग्रीले कसैलाई औंला उठाएको नहोस् र कुनै द्वन्द्वमा मेरो बिचार नपरोस् ।
सर्वप्रथम त मलाई साताका ब्लगर बनाएकोमा म हृदयदेखि नै मेरोरिपोर्टलाई धेरैधेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु । साथै म प्रसंसा गर्छु कि मेरोरिपोर्टले विभिन्न समसामयिक सवालहरुलाई यसले समावेश गरेको छ, चाहे त्यो शिक्षा होस्, खेलकुद होस् सामाजिक कार्य होस् होस या ब्यक्तिका निजी अनुभव सहितका आम नागरिकले देखेभोगेका अरु कुनै बिषय होस् ।